အဖေတူအမေကွဲအစ်ကို မှ ညီမဖြစ်သူကို သားမယား အကြိမ်ကြိမ်ပြုကျင့် - Real News
Home Local News အဖေတူအမေကွဲအစ်ကို မှ ညီမဖြစ်သူကို သားမယား အကြိမ်ကြိမ်ပြုကျင့်
အဖေတူအမေကွဲအစ်ကို မှ ညီမဖြစ်သူကို သားမယား အကြိမ်ကြိမ်ပြုကျင့်
မွန်ပြည်နယ် မုဒုံမြို.နယ် ကော. ခပုံကျေးရွာ အလည်ပိုင်း ရထားလမ်းအနီးနေ. ဒေါ်…. ၏ သမီး မ….. (၁၂)နှစ်အရွယ် ခလေးအား ဒေါ်….၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သူဦး…. ယခင် အိမ်ထောင်မှ ပါလာသော သား မောင်ပိုင်စိုးသူ (ခ) အဘိုင် ၂၁နှစ် မှ အလိုမတူဘဲ သားမယားအဖြစ် အကြိမ်ကြိမ် ပြုခဲ့ကြောင့် အိမ်နီးချင်းများ၏ ပြောပြချက်များအရ သိရ၍
သမီးဖြစ်သူ မ….. (၁၂)အားမေးမြန်အား မ…. မှ အစ်ကိုဖြစ်သူ ပိုင်စိုးသူမှ မိမိအား သာမယားအဖြစ်အကြိမ်ကြိမ် ပြုကျင့်ခဲ့ကြောင် ပြောသဖြင့် မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်….. မှ မွန်ပြည်နယ် မုဒုံမြို.နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်မြသိင်္ဂီမော် အား ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍သွားရောက်ပြောပြသဖြင့်
၁၈ရက်နေ. ၁၄:၀၀ ခန်.အချိန်တွင် ဒေါ်မြသိင်္ဂီမော် မှ နစ်နာသူအား မုဒုံမြို.နယ် မြို.နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးသို. ကူညီခေါ်ဆောင်သွားပြီး မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးအား အကျိုးကြောင်းပြောပြရာ မြို.နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူး မိုးလွင်ဦးမှ သက်ငယ်မုဒိန်းမှုကျုးလွန်သူ ပိုင်စိုးသူအား အချိန်မှီဖမ်းစီးနိုင်ရေးအတွက် ရဲတပ်ဖွဲ.ဝင်များအားညွန်ကြားခဲ့ပြီး ကျူးလွန်သူအား ၁၆:၀၀ ခန်.အချိန်တွင်ဖမ်းစီးရမိခဲ့ကြောင်သိရှိခဲ့ရပါသည်။
၎င်း ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ မုဒုံမြို.နယ် မြို.မရဲစခန်းမှ သက်ငယ်မုဒိန်းမှုကျုးလွန်သူ ပိုင်စိုးသူ အား ပ(၂၂၄၀/၂၀၁၉) ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၇၆ ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ထားကြောင်သတင်းရရှိခဲ့ပါသည်။
မှနျပွညျနယျ မုဒုံမွို.နယျ ကော. ခပုံကြေးရှာ အလညျပိုငျး ရထားလမျးအနီးနေ. ဒျေါ…. ၏ သမီး မ….. (၁၂)နှဈအရှယျ ခလေးအား ဒျေါ….၏ ခငျပှနျးဖွဈသူဦး…. ယခငျ အိမျထောငျမှ ပါလာသော သား မောငျပိုငျစိုးသူ (ခ) အဘိုငျ ၂၁နှဈ မှ အလိုမတူဘဲ သားမယားအဖွဈ အကွိမျကွိမျ ပွုခဲ့ကွောငျ့ အိမျနီးခငျြးမြား၏ ပွောပွခကျြမြားအရ သိရ၍
သမီးဖွဈသူ မ….. (၁၂)အားမေးမွနျအား မ…. မှ အဈကိုဖွဈသူ ပိုငျစိုးသူမှ မိမိအား သာမယားအဖွဈအကွိမျကွိမျ ပွုကငျြ့ခဲ့ကွောငျ ပွောသဖွငျ့ မိခငျဖွဈသူ ဒျေါ….. မှ မှနျပွညျနယျ မုဒုံမွို.နယျ ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျဒျေါမွသိင်ျဂီမျော အား ဖွဈစဉျနှငျ့ပတျသကျ၍သှားရောကျပွောပွသဖွငျ့
၁၈ရကျနေ. ၁၄:ဝ၀ ခနျ.အခြိနျတှငျ ဒျေါမွသိင်ျဂီမျော မှ နဈနာသူအား မုဒုံမွို.နယျ မွို.နယျရဲတပျဖှဲ့ရုံးသို. ကူညီချေါဆောငျသှားပွီး မွို့နယျရဲတပျဖှဲ့မှူးအား အကြိုးကွောငျးပွောပွရာ မွို.နယျရဲတပျဖှဲ့မှူး ရဲမှူး မိုးလှငျဦးမှ သကျငယျမုဒိနျးမှုကြုးလှနျသူ ပိုငျစိုးသူအား အခြိနျမှီဖမျးစီးနိုငျရေးအတှကျ ရဲတပျဖှဲ.ဝငျမြားအားညှနျကွားခဲ့ပွီး ကြူးလှနျသူအား ၁၆:ဝ၀ ခနျ.အခြိနျတှငျဖမျးစီးရမိခဲ့ကွောငျသိရှိခဲ့ရပါသညျ။
၎င်းငျး ဖွဈစဉျနှငျ့ပတျသကျ၍ မုဒုံမွို.နယျ မွို.မရဲစခနျးမှ သကျငယျမုဒိနျးမှုကြုးလှနျသူ ပိုငျစိုးသူ အား ပ(၂၂၄၀/၂၀၁၉) ရာဇသတျကွီးပုဒျမ ၃၇၆ ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့အရေးယူဆောငျရှကျထားကွောငျသတငျးရရှိခဲ့ပါသညျ။
Previous articleမြန်မာနိုင်ငံသား ၁၀ ဦးတင်ဆောင်လာတဲ့ ကား တိမ်းမှောက် ၄ ဦးသေဆုံး
Next articleအဂတိလိုက်စားမှုဖြင့်တရားစွဲခံထားရသူ မိုးညိုမြို့နယ် လဝက ဦးစီးအရာရှိ အကျဉ်းထောင်တွင် သေဆုံး
ကလေးဆေးရုံတွေကို နာမည်မဖော်ဘဲ နှစ်ပေါင်းများစွာငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့ ကီးနူးရီးဗ်စ်
ဆိုင်ကယ်ဝယ်မယ့် သူက ပိုက်ဆံထုပ်ထားခဲ့မယ် ဆိုင်ကယ်စမ်းစီးကြည့်ဦးမယ် ဆိုပြီး လစ်သွားတာ အကွက်လေးတွေ လှတယ်နော်
အထူး ကြားဖြတ်သတင်း ဗဟိုလမ်း ဗဟုိုအမျိုးသမီးဆေးရုံရှေ့ မျက်နှာချင်းဆုိုင် ခြံအမှတ် ၅၁ ခ တွင် မျက်နှာဖုံးစွပ် လူအုပ်စုဖြင့်...
လူသားများ မဖူးရသေးသော စေတီထူး ၃ ဆူဆိုတာ
မြောက်ဥက္ကလာဆေးရုံကြီး ထဲမှာ မမြင်သင့်သော မြင်ကွင်း
လေတိုးရင် ကျိုးတော့မလို ခါးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ပဲခူးသူလေး
မန္တလေးမြို့မှာ ဓားရှည်နဲ့ လိုက်လံခုတ်နေသူ ကို ရဲက သေနတ်နဲ့ပစ်ဖမ်း ဆေးရုံမှာ သေဆုံ
လင်မယားစကားများရန်ဖြစ်ရာမှ မသေမချင်း ဓားဖြင့်ထိုးခုတ်သတ်ဖြတ်မှုဖြစ်ပွား
တက္ကသိုလ်စာမေးပွဲ မေးခွန်းမှာ မထင်မှတ်ပဲစိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ကို ထည့်မေးလိုက်တဲ့ ကိစ္စ